musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Ndege dzemagetsi uye mabhuru makuru haakwanise kubhururuka
avhiyesheni • Bhizinesi Kufamba • nhau • ushanyi • kutakura • Akasiyana Nhau
Ndege dzemagetsi - kunge mabhuru nyuchi?
Kwemakumi emakore vadzidzi vezvidzidzo vakaratidza kuti mabhuru aisagona kubhururuka uye vakatsamwiswa zvakanyanya kuti vakaramba vachingobhururuka zvakadaro - vachishandisa equation dzakasiyana. Zvizhinji chinhu chimwe chete ichocho chiri kuitika neakagadzika-bapiro bhatiri-magetsi ndege. Ivo vaifanirwa kunge vasingakwanise, asi vanopfuura zana vari kumusoro uko nevakatenderedza chi1000 paodha.
Aya madiki saka haatombodi mutemo mutsva wekubhururuka.
Ivo vanongoteedzera iyo Tesla nzira ine mota pasi pazasi.
Mumushumo weIDTechEx, "Manned Electric Ndege: Smart Guta uye Dunhu 2021-2041," idzi magetsi dzakagadziriswa-mapapiro ndege pamwe nekuwongorora kwakasimba kwemagetsi emagetsi akamira kusimuka nekumhara kwendege dhizaini.
Iyo yekugadzirisa diki yekuvandudza inowanzo kuwanda. Maviri gumi% ekuvandudza anobatsira ne10% uye sarudzo yekuvandudza yakakura. Vanhu vanofungidzira zvisirizvo kuti Tesla inowana rekodhi renji kubva kune bhatiri riri nani, asi zvakaenzana zvakakosha kuchengetedza bhatiri zvakaringana padyo nemuganhu wayo, kubvisa zviuru zvezvikamu, uye zvimwe zvinhu. Range rinotonyanya kudiwa nendege diki nekuti renji ndeyekuchengetedza chinhu, saka maaviator anotsvaga 21 yekukwevera chinhu, kubvisa kiromita imwe yekukwirisa, mazana ezvikamu, uye asingashandi mota uye magetsi emagetsi.
Tatarisana neicho chaicho, naysayers dzendege diki dzemagetsi izvozvi vanoisa pfungwa dzavo kune hombe ndege yemagetsi uye kusimuka kusimuka kuri kusingagone. Ivo vane imwe poindi, nekuti isu parizvino tiri mumwaka weupenzi uko zvikumbiro zvakawanda zvisina musoro zvinokwezva shawa remari kubva kumeso-akavhara vatyairi vachitarisira iyo inotevera Tesla. Vadzidzi vezvitendero vaitaura chokwadi kuti dhizaini imwe ine mutsindo pamapapiro ega ega uye hapana chinhu chiri pakati chaizobudira kunze kwedenga kana imwe ikakundikana. Ivo vakarurama kunyevera kuti nezvino zviripo zvikamu, akawanda multirotor VTOL inodonha kubva mudenga mumaminitsi makumi matanhatu kubva kusimuka - hapana glide uye kunyangwe parachute kutumirwa panzvimbo iyoyo. Guta remhepo tekisi economics vanobvunzwa nemazvo mushumo, "Air Matekisi: Magetsi Vertical Tora-Ndege uye Kumhara Ndege 60-2021."
Vazhinji vari kutenderera kuVTOL nemapapiro akagadzika, saka vanogona kubhururuka sendege yenguva zhinji nguva zhinji, kutsungirira kwenguva yakareba, uye, mune dzimwe nguva, vanotsvedza munguva yechimbichimbi. Mumwe muenzaniso ndeyekutanga kweUK Vertical Aerospace yakayangarara pamadhora mazana maviri nemazana maviri anotevera Mhandara Atlantic neAmerican Airlines vachiisa maodha e2.2 yeiyo yakamisikidzwa-bapiro VTOL - akati wandei madhora emadhora kunyangwe pasina chinhu chiri mudenga.
Enzanisa maherikoputa anoshanda zvine mutsindo mukumira kwakamira asi pasina akasundira akasimba uye kugadzikana mumhepo. Vanobatsira kumisa zvivakwa zvepamusoro-soro, kutenderera kweawa imwe chete panguva. Hapana bhatiri VTOL inogona kuita izvozvo: ivo vanofanirwa kugadzirisa mashoma hover mabhizinesi kesi.
Kudzoka neyakajairika kusimuka uye kumhara yakamisikidzwa-mapapiro ndege, kune mabhuru-akafanana senge ekuverenga anonyevera kuti hapana imwe yeakarongwa 8- kusvika zana-zvigaro shanduro dzakavimbiswa muna 100-2026 dzinogona kubhururuka. Ivo vanoshandisa zvisizvo zvisizvo nekuti 2030 vanoshandisa iyo yakasarudzika musimboti wepasi kushanda uye vamwe vazhinji vanoshandisa iyo nyowani nyowani yekuparadzira kukanda DT, inosanganisira akawanda mafambisi padivi bapiro. DT zvinoreva kugovera neapapurika uye yakakura muzana yehuremu, nzvimbo, mutengo wezvinhu, kudhonza, uye kureba kureway. NASA uye DLR kuverenga uye kuedza kunotsigira izvi. United Airlines iri kuronga kuburitsa ndege dzemagetsi na2026.
Ivo vanokanganisa vakanganisawo nekuti ivo vanofuratira iyo "zvese zvishoma zvinobatsira" nzira yendege hombe. Semuenzaniso, yanhasi inosvibisa nharaunda ndege ine makiromita makumi matatu ewiring uye yakashata yekudhonza chinhu asi iyo yakazvarwa-yemagetsi yakafanana neTesla. Tesla renji inouya zvakanyanya kubva kune inozvigadzirisazve mabhureki uye iyo yakaenzana nendege inofambisa inodzosera pamaburiro nemavhiri anodzokazve pakumhara. Chokwadi, mavhiri ane simba anogona kuita kuti magetsi emagetsi tekisi uye kusimuka zvinyatsoshanda.
Ngatimbokurukurai muenzaniso mumwe. Bye Aerospace ine pamusoro pemitemo mazana manomwe nemakumi manomwe - pamusoro pemadhora mazana maviri nemakumi mashanu, nekutumirwa kuri kuda kutanga - kubva kuzvikoro zvinobhururuka uye vanofambisa matekisi emhepo kune ayo maviri- uye mana-zvigaro bhatiri ndege iwe yaunogona kuyedza kubhururuka nhasi. Ichangobva kuzivisa 720-mutakurwi bhatiri-yemagetsi ndege pane yakafanana "yakaderera zvachose mutengo-we-muridzi" nhandare, asi iyo 250 nm renji (yakatakura) yakaziviswa seinotsamira pakubatana neOxis Energy yebhatiri nyowani. Iwo maaysaers akagwinha apo Oxis akakurumidza kuenda mudumbu kumusoro. Nekudaro, iyo hofori LGChem iri pane yakafanana nguva yekupa bhatiri rakafanana uye, saTesla, Bye haana kumbobvira aivimba bhatiri rimwe. Ivo vanoita basa rekugunun'una pane zvese zvishoma zvigadziriso. Aya anotevera maficha eichi chirevo anoratidza zvimwe zve izvi uyezve akawanda machengetedzo maficha kupfuura ayo akareba glide, emergency autolanding system uye ndege parachuti.
Iyi eFlyer 800 dhizaini iri nyowani nyowani kubva kumusoro kusvika kumuswe. Aerodynamic kunyatsoshanda yakapetwa kaviri yeyakajairwa nendege turboprop ndege yakafanana saizi - yakakwira yakazara propulsive-system kunyatsoshanda ine yakakwira mota kunyatsoshanda ine yakaderera kutonhora kudhonzera, 2 mapapiro-akasimudzwa mota dzemagetsi imwe neimwe iine mbiri-isina basa mota mamhepo uye quad-redundant bhatiri mapakeji. Modest renji inowedzera inopihwa kubva kune yakasarudzika ekuwedzera emagetsi ezuva maseru (pamwe iyo satellite-giredhi iyo yavakaedza - inogadzira zvakapetwa magetsi emagetsi ezuva ano nendege) uye mu-vhiri yemagetsi tekisi.
Jet It, uye JetClub, makambani masisita evaridzi muNorth America neEurope zvakateerana, vakasaina chibvumirano chekutenga chemabhirioni-emadhora chezvikwata zveeFlyer 800 ndege. Uye zvakare, L3Harris Technologies uye Bye Aerospace vakasaina chibvumirano chekuvandudza ese-emagetsi, akasiyana-siyana mishoni izvo zvinopa huchenjeri, kuongorora, uye kugona (ISR) kugona.
Parizvino, Bye Aerospace haisi kuita bhuru nyuchi nemutsva wekubhururuka, asi inogona kuwedzera kufambiswa kwekupararira panguva yekusarudza kwayo. Zvichakadaro, dzese bhatiri-emagetsi ndege dzinokwira nekukurumidza kupfuura dzinosvibisa dzinofambiswa nemhepo seTeslas inomhanyisa nekukurumidza. Ingo chenjera nezve kutaura kuti hapana bhatiri-bhizinesi remagetsi - kana ndege yedunhu inogona kubhururuka. Kune bhuruu rinonyemwerera kwauri kubva kumusoro.